Mustaqbal aan hub nukliyeer lahayn - Maarso Adduunka
Bogga ugu weyn » Noticias » Qoraalada saxaafadda » Mustaqbal aan hub nukliyeer lahayn
Mamnuuca hubka nukliyeerka ayaa mustaqbal cusub u furey aadanaha
-50 dal (11% dadka adduunka ku nool) ayaa sharci darro ku tilmaamay hubka nukliyeerka.
-Hubka Nukliyeerka waxaa loo mamnuuci doonaa sida hubka kiimikada iyo bayoolojiga.
-Qaramada Midoobay waxay dhaqaajineysaa heshiiska Mamnuuca hubka Nuclearka bisha Janaayo 2021.
Bishii Oktoobar 24, mahadsanid ka mid noqoshada Honduras, tirada 50 waddan oo ansixiyay Heshiiska Mamnuuca Hubka Nukliyeerka (TPAN) ee ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa la gaadhay. Saddex bilood gudahood, TPAN waxay si caalami ah u dhaqan geli doontaa munaasabad ka dhici doonta xarunta Qaramada Midoobay ee New York.
Dhacdadaas ka dib, TPAN waxay sii wadi doontaa waddada loo maro xayiraadda guud ee hubka nukliyeerka. 50-kan dal waxaa sii wadi doona inay ku biiraan 34-ka durbaba saxiixay TPAN waxaana sugaya ansaxinta iyo 38 kale oo ka shaqeeyey oo taageeray abuuritaankeeda UN. Xiisadaha ayaa ka dhalan kara wadamada intiisa kale sababo la xiriira cadaadiska ka imanaya awoodaha nukliyeerka si loo aamusiyo rabitaanka dadweynaha, laakiin, xaaladaha oo dhan, waxay noqon doontaa muwaadiniinta ay tahay inay kor u qaadaan codkeena oo ay ku cadaadiyaan dawladeena inay wax ka qabato. ku biir qeylada guud ee ka dhanka ah hubka nukliyeerka. Waa inaan ka dhignaa qayladhaan inay sii socoto koritaanka ilaa awoodaha nukliyeerka ay noqdaan kuwo sii kordhaya, halka muwaadiniintooda ay dalbanayaan inay ku biiraan firfircoonida ilaalinta nabada oo aysan kor u qaadin musiibada.
Tallaabo aad u weyn oo fureysa fursado aan la qiyaasi karin illaa dhowaan
Gelitaanka xoogga TPAN waa tallaabo aad u weyn oo fureysa fursado illaa dhowaan aan la qiyaasi karin. Waxaan u aragnaa inay tahay lebenkii ugu horreeyay ee laga soo qaado derbiga in la dumiyo, markii aan gaarnayna waa calaamad muujinaysa in horumarka la sii wadi karo. Waxaan wajahnay malaha wararkii ugu muhiimsanaa ee tobannaan sano ee lasoo dhaafay heer caalami. In kasta oo aysan jirin hal war oo ka mid ah warbaahinta rasmiga ah (dacaayad), waxaan saadaalineynaa in firfircoonidaani ay sii fidi doonto, oo dhaqso badan marka ficilladan qarsoon iyo / ama qaloocsan ee awoodaha awoodda laga dhigi karo mid muuqda.
Halyeeyada ugu weyn ee hanashadaan waxay ahayd Ololaha Caalamiga ah ee lagu tirtirayo Hubka Nukliyeerka (ICAN), oo ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee 2017, taas oo ku muujisay barteeda twitter-ka muhiimadda ay leedahay munaasabadda, oo dhaqan geli doonta illaa iyo Janaayo 22, 2021.
Bishii Maarso ee Adduunka waxaan ogaanay in xitaa waddamada ay dowladiisu taageeraan TPAN, inta badan muwaadiniintu aysan ka warqabin xaqiiqadan. Marka la fiiriyo xaalada caalamiga ah ee isku dhacyada iyo hubanti la’aanta mustaqbalka, ku dhexjirta aafada na saameyneysa, waxaa jira saturation calaamado taban iyo “war xun”. Sidaa darteed, si aan ugu taageerno si wax ku ool ah, waxaan soo jeedineynaa inaanan saameyn ku yeelan cabsida masiibada nukliyeerka sida abaabulleeye, laakiin, liddi ku ah, inaan xoogga saarno sababaha loogu dabaaldegayo mamnuucista.
Ururka World without Wars and Violence (MSGySV), xubin ka ah ICAN, wuxuu ka shaqeynayaa inuu sameeyo dabaaldeg weyn Janaayo 23 si loo xuso taariikhdan taariikhiga ah. Waxay yeelan doontaa qaabka dalwaddii ee xisbiga cyber-party. Waa soo-jeedin furan oo dhammaan kooxaha xiiseynaya, jilayaasha dhaqanka iyo muwaadiniinta lagu casuumay inay ku soo biiraan. Waxaa jiri doona booqasho indha indheyn ah taariikhda guud ee dagaalka ka dhanka ah hubka nukliyeerka: abaabulid, riwaayadaha, socodyada, shirarka, banaanbaxyada, baaqyada, howlaha waxbarashada, isweydaarsiga cilmiga, iwm. Tan waxaa lagu dari doonaa dhammaan noocyada muusikada, dhaqanka, farshaxanka iyo waxqabadyada kaqeybgalka muwaaddinka maalin loogu dabaaldego Planetary.
Waxaan ku horumarin doonnaa ficilkan isgaarsiintayada iyo daabacaadahayada soo socda.
Maanta waxaan ku biireynaa hadalada Carlos Umaña, agaasimaha caalamiga ah ee ICAN, oo si xamaasad leh u yiri: "Maanta waa maalin taariikhi ah, oo astaan ​​weyn u leh sharciga caalamiga ah ee ku aaddan hub ka dhigista nukliyeerka ... 3 bilood gudahood, marka TPAN ay rasmi ah, mamnuucistu waxay noqon doontaa sharciga caalamiga ah. Sidaas ayuu ku bilaabmayaa casri cusub… Maanta waa maalin rajo ”.
Waxaan sidoo kale fursadan uga faa'iideysaneynaa inaan u mahadcelino oo aan u hambalyeynno waddamada ansixiyay TPAN iyo dhammaan ururada, kooxaha iyo dhaqdhaqaaqayaasha shaqeeyay oo sii wadaya sidaas ay tahay Bini'aadamnimada iyo meeraha inay bilaabaan inay ku socdaan waddada u horseeda ciribtirka hubka nukliyeerka. Waa wax aynu si wada jir ah u gaadhayno. Waxaan dooneynaa inaan si gaar ah u xusno Doonta Nabadda oo, laga bilaabo Japan, maalintii dabaaldega, ay xusuusatay oo aqoonsatay shaqadii ay MSGySV ka qabatay ololihii ICAN ee TPAN dhammaan safarkii WW2.
Waxaan sii wadeynaa inaan la shaqeyno qof walba nabada iyo rabshadaha. Tallaabooyinka cusub ee la qorsheeyay, MSGySV waxay qaban doontaa webinar loogu talagalay ardayda iyo macallimiinta jaamacadaha kala duwan iyada oo loo marayo qaab taxane ah oo ay Xoghaynta Joogtada ah ee Shir Madaxeedka Nabadda Nobel ay qorsheysay bilaha soo socda. Mawduucu wuxuu noqon doonaa: "Waxqabadka saldhigga bulshada iyo kor u qaadiddooda caalamiga ah"
Iyada oo dhiirrigelinta kuwan iyo ficilo kale oo badan oo soo socda, waxaan xoojinaynaa ogeysiiskii aan sameynay Oktoobar 2 si aan u qabanno 3da Maarso ee Nabadda iyo Rabshadaha 2024.
Liiska wadamada ansixiyay TPAN
Antigua iyo Barbuda, Austria, Bangladesh, Belize, Bolivia, Botswana, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gambia, Guyana, Honduras, Ireland, Jamaica, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Lesotho, Malaysia , Maldives, Malta, Mexico, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palau, Palestine, Panama, Paraguay, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, South Africa, Thailand , Trinidad and Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam.
Maqaalka asalka ah waxaa laga heli karaa bogga Wakaaladda Caalamiga ah ee Pressenza: Mamnuuca hubka nukliyeerka ayaa mustaqbal cusub u furey aadanaha.